Ash Munshi's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Ash Munshi
Asati ajoina Pepperdata, Ash aive sachigaro mukuru weMarianas Labs, kudzika kwakadzika kwekudzidza kwakatengeswa muna Zvita 2015. Asati adaro, aive CEO weGrafite Systems, hombe yekuchengetedza dhata yekutanga iyo yakatengeswa kuEMC DSSD muna Nyamavhuvhu 2015. Ash zvakare yakashanda seCTO yeYahoo, seMukuru wevose makambani eruzhinji neakazvimiririra, uye ari mubhodhi rezvakawanda tekinoroji kutanga. Ash akapinda Harvard University, Brown University, uye Stanford University.
Kuwedzera Big Data Value nePepperdata's Big Data Stack Optimization uye Automated Tuning
China, Gunyana 17, 2020 China, Gunyana 17, 2020 Ash Munshi
Kana yakakwenenzverwa nemazvo, hombe dhata rinogona kukunda mashandiro Big data ikozvino inoita basa rakakosha mune zvese kubva kubhengi kuenda kune hutano kune hurumende. Iko kukura kunoshamisa kwekufungidzira kwemusika wepasirese wedata, kubva pamadhora mazana masere emadhora mazana masere negumi nematanhatu mugore ra138.9 kusvika pamadhora mazana mairi mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemazana mana nemakumi mairi nemakumi mairi nemaviri, chiratidzo chinoratidza kuti dhata hombe rave chigaro chekusingaperi munzvimbo yemabhizinesi. Nekudaro, kuti ugadzire iyo yakakosha kwazvo kubva kune rako hombe dhata, yako hombe dhata dhata inoda